QM oo sheegtay 270 kun oo Muslimiinta la silciyo ee Rohingya ay u gudubtay Bangladesh - Horn Future
QM oo sheegtay 270 kun oo Muslimiinta la silciyo ee Rohingya ay u gudubtay Bangladesh
GENEVA(Horn Future)-Warbixin Qaramada Midoobay ay soo saartay ayaa lagu sheegay in in ka badan rubuc malyuun qaxootiga Muslimiinta Rohingya ay u gudbeen dalka Bangladesh, labadii toddobaad ee ugu dambeeyay, si ay uga firxadaan in lagu laayo Myanmar.
Dunya Aslam Khan oo ah afhayeenada ururka qaxootiga ee Qaramada Midoobay ayaa shir-warbaahineed ay ku qabatay xarunta dhexe ee Geneva ku tidh “Waxa imika yimiday dalka Bangladesh 270 kun oo qof oo raadinaya meel ay ku badbaadaan”.
Waxay sheegtay in xeryaha qaxootiga ee Bangladesh ay u buuxsameen si ka baxsan awooddooda, waxana dadkan qaxootiga ay imika ahaan deggeen goobo kumeelgaadh ah oo saaran dhinacyada ku dherersan waddooyinka magaalooyinka Ukhiya iyo Teknaf oo ku dhow soohdinta Myanmar.
Waxay ugu yeedhay Rohingya inay yihiin “Muslimiin tiro yar oo ku nool Myanmar” taas oo la kulanta takoorid iyo saboolnimo muddo tobanaan sano ah,waxayna intaas ku dartay in laga mamnuucay xuquuqdooda aasaasiga ah, oo ay ku jirto xoriyadda isku gudubka iyo inay helaan waxbarasho ama shaqo.
Dhinaca kale barnaamijka Cunnada Adduunka ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay Jimcihii in degdeg loogu baahan yahay ($ 14.8 miilion) malyuun oo dollar si loo taageero dadka dhawaan yimiday dalka Bangladesh, iyo sidoo kale 106 kun oo qof oo ku nool xeryaha.
Waxa barakacan cusub ee ay ka daaleen dadkan Muslimiinta ah uu ka bilowday gobolka Rakhine ee Myanmar laba toddobaad ka hor markii ciidamada taliska buddistigu ku bilaabay howlgalo ka dhan ah bulshada Rohingya halkaas oo ay ku xasuuqeen in ka badan 2 kun oo qof sida uu ku sheegay warbixin uu soo saaray urur fadhigiisu yahay Britain,halka warar kale ay sheegeen 400 oo dhimasho.
Waxa maleeshiyada buuddistiga iyo ciidamadoodu ay kula kaceen dadkan Muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay falal bini’aadanimada ka baxsan oo gumaad ah oo ay kamid yihiin carruurta ku jirta xilliga naas-nuujinta oo qorta la gooyo,nolosha oo lagu gubo dadka,kufsi baahsan iyo in la gubay boqolaal tuulooyiin ah, xilli waxa loogu yeedho beesha caalamku ay gashay aamusnaan dhameeystiran oo u muuqata shirqool caalami ah oo ka dhan ah dadkan oo xataa ka waayay hiil kuwa ay wadaagaan diinta.
Warbixinada kasoo baxay ururada caalamiga ah ayaa lagu sheegay in dalka Bangladesh uu hore u marti galiyay qiyaastii 400 kun oo ah qaxooti Rohingya,iyada oo imika ahaana uu la kulmayo qulqulka qaxooti cusub tan iyo markii ay howlgalka xasuuqa ah ka bilaabeen ciidamada taliska buuddsitiga ah gobolkan Muslimiintu deggaan.
Bulshada Muslimiinta ee Rohingya ayaa waxay Qaramada Midoobay ku tilmaamtay inay yihiin dadka dunida si ugu ba’an loogu silciyo,iyaga oo la kulmeen cabsi badan oo ku aaddan weeraro tan iyo markii lagu xasuuqay tobonaan kamid ah dagaallo salka ku hayay isirka sannadkii 2012.
Qaramada Midoobay ayaa diiwaan galisay xadgudubyo ay kamid yihiin kufsi kooxeed iyo dilal baahsan oo ay ku jiraan carruurta yaryar iyo carruurta ku jirta xilliga naas-nuujinta oo si bahalnimo oo naxdin leh loo garaaco iyo dadka oo la waayo, falalkaas oo ay ku kacaan ciidamada amaanka ee taliska buuddistiga ah.
Dhinaca kale madaxwaynaha dalka Turkey Rajap Dayib Erdogan ayaa ah hogaamiyaha kaliya ee si adag uga hadlay xasuuqan iyo xadgudubyadan lagu hayo bulshadan ay dhabarka u jeediyeen sokeeye iyo shisheeya ba,waxana Turkey ay noqotay dalkii ugu horeeyay ee gaadhsiiya gargaar bini’aadanimo xilli ay galeen kuwa sheegta hogaanka Islaamka xaalad lamid ah tan qofka dhintay oo kale.
« Raysal wasaaraha Pakistan oo furay warshadii shanaad ee tamarta nuclear ka laga dhaliyo	» Kashmiri leaders face arrest as Indian minister visits